XOG: Saddexdii Arrimood Ee Sababay Inay Barbar-dhac Ku Dhamaato Ciyaartii Xalay Ee Man United vs Arsenal – Miyuu Garsooruhu Qayb Ka Ahaa? – Cadalool.com
Sidii hore loo saadaaliyey, Manchester United guul-darro kama soo gaadhin gurigeeda ciyaartii ay xalay ku qaabishay Arsenal balse may ahayn natiijo ay ku qanceen jamaahiirta maadaama ay hal dhibic kaliya ka heleen ciyaar ay garoonkooda joogeen xili ay kaalinta siddeedaad ee kala sarraynta kooxaha ku jiraan.
Gunners waxay kulankan ku diiwaangashadeen taariikh ay raadinayeen 11 sannadood, waana in aan mar kaliya laga adkaanin 20 ciyaarood oo xidhiidh ah dhamaan tartamada, xalayna waxay muujiyeen inay u qalmayeen guusha iyo waliba niyad samaan badan oo taageereyaasha gashay.
Jamaahiirta Gunners waxay ku qanceen in macallinkooda Unai Emery uu u keeni doono wax weyn maadaama uu bandhig cajiib ah sameeyey labadii ciyaarood ee Tottenham iyo Man United ee iskugu xigay oo uu afar dhibcood ka helay.
Haddaba waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa saddex arrimood oo sabab u ahaa in labada kooxood barbar-dhac ku qaybsadaan dhibcaha, guushuna aanay dhinacna raacin.
Waxay ahayd ciyaar adag oo xoog iyo jidh ay isticmaalayeen ciyaartoygu, aakhirkiina keentay in ay yimaaddaan dhaawacyo.
Arsenal ayaa ku weyday Aaron Ramsey iyo Rob Holding oo laga saaray garoonka, waxaana dhibatooday Lucas Torreira oo waxyeello soo gaadhay inkasta oo uu kulanka dhamaystay halka Shkodran Mustafi laga dareemayay xanuun iyo inuu u baahan yahay beddel. Dhinaca Manchester United waxa ka baxay Anthony Martial, waxaase jiray laacibiin kale oo jidh ahaan jugu u qabay balse aanu haleelin dhaawac ay u baxaan. Arrintani waxay wiiqday qorsheyaashii labada tababare ciyaarta usoo dejisteen.
Guji 2 si aad warbixinta oo dhan u akhrido